Sakafo ara-tsakafo vita amin'ny kitapo fotsy vita amin'ny hazo fotsy
Firenena maro no namoaka fandrarana ny plastika. Nandritra izany toe-javatra izany dia nanoro ny fitoeran-tsivalana taratasy kraft fotsy vita amin'ny sakafo misy fonony mangarahara avo ho an'ny mpanjifa maro izahay, izay afaka mampiseho tsara kokoa ireo sakafo ao anaty boaty.
Ny lasitra entintsika ho an'ny kaontenera sakafo dia ampifanarahana amin'ny fonosana sakafo isan-karazany, toy ny sushi, bento, salady, mofo, sns.
Manaiky ny haben'ny mpanjifa, ny endriny, ny fanontana ary ny fonosana ny vokatra.
Namidinay tany Italie, Espana, Kanada, Aostralia ary firenena hafa ireo kaontenera ireo. Izahay dia miahy ny amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny famolavolana famoronana hanampiana ny mpanjifa hitsitsy ny vidiny ary hanana maridre tsara
CHUNKAI'S Sushi boaty dia manana tombony lehibe toy ny etsy ambany:
1.Good Sealling ho an'ny fitehirizana azo antoka
2.Dehibe habe ho an'ny safidinao
3. fitaovana matevina sy mafy kokoa
4.Exquisite Design miaraka amina modely tsara tarehy
5.Antivogging, tsara kokoa aseho
Vata misy voankazo vita amin'ny taratasy
Ity boaty misy voankazo vita amin'ny taratasy ity dia misy taratasy matevina telo matevina, mahery sy mateza. Natao ny vavahady mba tsy hahatonga ny vokatra ho mora lo. Fanontam-pirinty modely mahafinaritra, mifanaraka amin'ny sarin'ny manga, tsara tarehy sy malala-tanana, manatsara ny sandan'ny vokatra. Ny tantana dia mitombina amin'ny famolavolana, tsy mora vaky, ary tsy mankarary tanana. Ny boaty dia matevina sy mafy orina, akora ara-tsakafo misy mari-pahaizana FSC, mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana, izay afaka manaraka ny fenitry ny FDA, azo antoka ary mandoto. -fahana. Ny firafitry ny lipotra dia manamora ny fanokafana sy ny fanidiana mandritra ny fampiasana azy.
Pizza Box 3 mitafo matevina
Tsara be ny Printer Pizza Box, manintona ny lamina, ary tsy mora mihena izy io. Toerana ambonimbony sy malefaka, vita pirinty azo namboarina, ary ny famolavolana lavaka fanamafisana dia miantoka fa tsy mihasimba ny pizza. Ny boaty dia mafy orina, akora ara-tsakafon'ny sakafo, mahasalama sy sariaka amin'ny tontolo iainana, izay afaka manaraka ny fenitry ny FDA, azo antoka ary tsy misy loto. Ny firafitry ny lipotra dia manamora ny fanokafana sy ny fanidiana mandritra ny fampiasana azy.
Tavoahangy vovoka vita amin'ny volo plastika
Ity tavoahangy volo vita amin'ny volo plastika ity dia miangona ao amin'ny aziatika ankehitriny. Afaka manome vidiny tena mahomby tokoa amin'ity tavoahangy ity izahay, satria izahay irery no nanary azy io. Raha te hividy tavoahangy vovoka vita amin'ny volo vita amin'ny volo plastika mora vidy ianao, ity no ho safidinao tsara indrindra. Namidinay tany Etazonia, Rosiana, EU ary firenena hafa ity tavoahangy ity. Mikarakara ny vidiny tsara indrindra izahay miaraka amina endrika famoronana hanampiana mitsitsy vola ny mpanjifa ary mahazo maridre tsara.
500ml Matte tavoahangy fitaratra fitaratra mainty
Ity tavoahangy 500ml Matte Black Glass Spray ity dia tena tsara tarehy, mety amin'ny karazan-tsiranoka rehetra. Ity tavoahangy vita amin'ny vera vita amin'ny vera tsy misy fangarony ity dia fonosana 4 fonosana 16 oz ho an'ny menaka esensial, aromaterapy, vokatra fanadiovana, ranomanitra, Sterilizer misy alikaola, miaraka amin'ny Sprayers maimaimpoana 4, 4 Caps .Package dia misy --- tavoahangy 4 fonosana 16 oz misy tavoahangy plastika tena ilaina, 4 tavoahangy tavoahangy ary labozia mainty 8 Pcs ho an'ny fampifangaroana, vokatra fanadiovana ao an-trano. Ny tavoahangy fitaratry ny verana 16 grama miaraka amina bika mora misintona izay azo apetraka amin'ny zavona na renirano mahery. Azontsika atao ny manamboatra ny lokon'ny tavoahangy, koa ny marika na ny pirinty pirinty amin'ny tavoahangy na satroka.
Telefaona ： 0086-021-57109876
Mailaka ： sales@shyilong.cc
Adiresy ： No.1150 Xinlin Road, Zhelin Town, Distrikan'i Fengxian, Shanghai, Sina